Gorma laga qabanaya Shirweynaha dib u heshiinta Galmudug? (Daawo) – Radio Daljir
Gorma laga qabanaya Shirweynaha dib u heshiinta Galmudug? (Daawo)
Luulyo 23, 2019 6:35 g 0
Guddiga qaban-qaabada shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa sheegay in shirka la qaban doono 5ta bisha Agoosto, 2019-ka.
Guddigan oo dhowaan ay dowlada federalku magacawday ayaa sidoo kale sheegay in shirka uu ka dhici doono magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay ka qeybgali doonaan 356 ergo oo matalaya beelaha dega Galmudug.
Dowladda Federaalka oo ka haddashay war la xiriiray Qaraxyada iyo Qatar